Samsung nwere ike ịlaghachi na gam akporo Wear na smartwatches ya Gam akporosis
Google ahụ tụbara towel ahụ afọ ole na ole gara aga na ụdị nke gam akporo maka mbadamba karịsịa dọtara mmasị, ma ọ dị mwute ikwu na ọ dị ka ọ bụ ihe nkịtị na ụlọ ọrụ ahụ, ebe ọ bụ na Wear OS ụzọ atọ nke otu ahụ mere. N'ihi nleghara anya a nke Google, ọtụtụ bụ ndị nrụpụta kwụsịrị iji ya na smartwatches ha.
Otú ọ dị, ihe nwere ike ịgbanwe na ọnwa ndị na-abịanụ ma ọ bụrụ na anyị attentionaa ntị na akaụntụ Twitter UniverseIce, bụ onye kwuru nke ahụ Samsung na-atụle iji dochie Tizen na ya smartwatches maka Wear OS na ọgbọ ọzọ na ọ na-ebupụta na ahịa.
O yikarịrị ka Samsung ọ na-atụle ịgbanwe sistemụ arụmọrụ n'ihi enweghị ngwa dị maka Tizen, otu n'ime nsogbu ndị anyị na-ezute na ikpo okwu a, mana Samsung enweela ike imeri ekele maka ngwa nke obodo ya.
Samsung malitere jiri Tizen na smartwatches ha na 2014 na Gear 2 na Gear 2 Neo. Ruo mgbe ahụ, ejiri m gam akporo Wear dị ka nke a dị fechaa nke gam akporo maka ngwaọrụ a na-akpọ.
Ọ bụghị nke mbụ
Ọ bụghị oge mbụ, ma eleghị anya ọ gaghị abụ nke ikpeazụ anyị nụrụ banyere Ekwe omume nke Samsung gbahapụrụ Tizen n'ọtụtụ elekere smart, asịrị na-agbasa kemgbe ọtụtụ afọ.
O yikarịrị ka Samsung ọ bụghị n'ihi ọrụ nke nọgide na-enwe sistemụ arụmọrụ maka smartwatches anyị nwere (Wear OS) dịka ha nwere ọtụtụ mbadamba nkume, n'ihi ịhapụ Google.
Maka ugbu a, anyị ga-eme ya chere maka mwepụta nke ụdị ndị ọzọElsdị nke nwere ike ịhụ ìhè ụbọchị n'August, mgbe ụlọ ọrụ Korea na-eweta ọgbọ nke atọ nke Galaxy Z Fold, ụbọchị nke anyị ga-amakwa ma ọ bụrụ na akara ngosi ahụ akwụsịla adị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung nwere ike ịlaghachi na Wear gam akporo na smartwatches ya